छातीमा झण्डा बोकेर ‘सारेगमप’ मा बालगायक आयुषले दिए धमाकेदार प्रस्तुती ( भिडियो सहित )
गायन क्षेत्रमा नेपाली हरु कम छैनन् भन्ने कुरा को प्रमाण लगातार नेपाली गायक गायिका हरुले दिइ रहेका छन्। सारेगामापा जस्तो भारतको चर्चित र ठुलो रियालिटी शोमा नेपाली हरु पुगेर करोडौ भारतीय हरुलाई चकित बनाइरहेका छन्। यसै क्रममा सारेगमप लिटिल च्याम्समा अहिले नेपालका २ बालकहरुले आफ्नो जादुइ स्वरका कारण हङ्गामा मचाइरहेका छन् । करोडौ भारतीय जनता भएको देशमा पुगेर उनीहरुलाई धुलो चटाउदै टप १५ सम्म पुगेर उनीहरु निरन्तर अघि बढ्ने क्रममा रहेका छन्। यस अघि पनि नेपाल आइडलका मेनुका पौडेल ले आफ्नो स्वरकी कारण बलियो दाबेदारी देखाउदै टप ११ सम्म पुग्न सफल बनेकी थिइन।
यस पटक भने ईटहरीका प्रितम आचार्य र सिन्धुपाल्चोकका आयुष केसीले सारेगामापामा नेपालको नाम चम्काईरहेका छन् । भारतको जि टिभी बाट प्रसारण हुने गरेको सारेगामापा १२ बर्षीय आयुष केसीले आफनो धमाकेदार प्रस्तुती दिएर जज सहित सबैलाई चकित बनाएका छन् । उनले गाएको १९४२ अ लभस्टोरी फिल्मको कुमार सानुको आवाजमा गाइएको गीतलाई लाइ गाएर सबै लाइ चकित बनाएका हुन्। जादुयि स्वरको धनि उनि ले दिएको प्रस्तुती निकै सुमधुर रहेको थियो । संगीत भनेपछि हुर्रुक्कै हुने उनीले सानै बाट गीत गाउने गर्थे। यस शोमा रहेका अन्य भारतीय प्रतियोगीहरु समेत चुनौती दिदै अघि बढी रहेका छन्। यस्तै गरि अर्का प्रतियोगी प्रितम आचार्यले यसै कार्यक्रममा भोलि आफनो प्रस्तुती दिने कार्यक्रम रहेको छ ।
उनको गीत सुनेर जजहरु अमाल मलिक , सान र ऋचा शर्माले प्रशंसा गरे। गायनमा उनले जुरीबाट ९८ प्रतिशत स्कोर पाए । नेपाली पोशाकमा छातीमा नेपालको झण्डा र शिरमा ढाका टोपी लगाउँदै कायक्रममा प्रस्तुत भैरहदा सबै नेपालीले गर्व महसुस गरे। उ नले गीत गाईसकेपछि नायक अनिल कपुरले पनि आयुषको चर्चा गरे । हाल आयुष भक्तपुरको मोर्डन स्कुलमा कक्षा ७ मा अध्यनरत गरिरहेका छन्।
भक्तपुर ठिमीका नेपाली सानो बाबु आयुष केसीले भारतको चर्चित गायन रियालिटी शो सारेगमपमा गीत गाउदा जजनै चकित…#plz_share
Geplaatst door Raj Kumar Lamichhane op Zaterdag 23 februari 2019
तेरिया मगर खेल्दै फिल्म, बन्दैछिन हिरोइन ! प्रदिप ' रोजी ' बेहाल
भाइरल बाल गायिका समिक्षाको मनै रुवाउने गीत ' बाबा ' सार्बजनिक ( भिडियो )
ठुलो सहयोग बोकेर शिशिर भण्डारी बिदेशी जेलमा रहेका बिनोद रानाभाटको घर पुगे....... हेर्नुस भिडियोमा
संकर बिसी र बिनु शाक्यको अभिनयमा ‘मेरो राजै’ ( भिडियो सहित)
Previous Article मनकारी जोडी ! बिद्यालयमै बिबाह, सबै खर्च जोगाएर विद्यालयलाई दिए लाखौ सहयोग
Next Article दुखद खबर ! अमेरिकामा नेपालीमाथि गोली हान्यो १ जनाको मृत्यु, अर्का एक घाइते